आज जया बच्चनको जन्मदिन, कति बर्ष लागिन् त उनी ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»आज जया बच्चनको जन्मदिन, कति बर्ष लागिन् त उनी ?
आज जया बच्चनको जन्मदिन, कति बर्ष लागिन् त उनी ?
By पूजा बानियाँ on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:१२ हलिवुड/बलिवुड
एजेन्सी। बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनकी श्रीमती जया बच्चनको आज जन्मदिन रहेको छ। उनि आज आफ्नो ७० औ जन्मदिन मनाउदै छन् । सन् १९४८ अप्रिल ९ मा भारतको मध्य प्रदेश जवलपुरमा जन्म भएकी जया एक कुशल अभिनेत्रीका साथै एक कुशल राजनेत्री पनि हुन् । पत्रकार तरुण कुमारका तीन सन्तान मध्ये कि उनी जेठी हुन् ।
भारतको सेट जोसेफ कन्वेंटमा आफ्नो अध्ययन पुरा गरेर उनले फिल्म लाइनमा हात हालेकी थिइन। केवल १५ बर्षको उमेरमै उनले चर्चित निर्माता तथा निर्देशन सत्यजित रे को फिल्म ‘महानगर’मा काम गर्ने अवसर पाइन् । उनि अभिनित बाग्ला कमेडी फिल्म ‘धन्नी मेहे’ बक्स अफिसमा सुपरहिट रह्यो। अनि बलिउड क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्रीको सुचीमा अर्को नाम सामिल भयो ‘जयाको’।
यस पछी लगातार फिल्मको अफर आउनु उनका लागी सामान्य कुरा रह्यो। नभन्दै सन् १९७१ मा निर्माता तथा निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जीको फिल्म ‘गुड्डी’मा अभिनय गर्ने अवसर उनले पाइन। उक्त फिल्ममा रहेको चुलबुले केटीको भूमिकालाई दर्शकले आजसम्म याद गर्छन । उक्त चलचित्रको सेट मा निर्देशद्वारा अमिताभ बच्चनसँग चिनजान बढे लगत्तै केहि समय पछी उनीहरु बैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएका थिए ।